သိပ္ပံဝတ္ထုလို့တောင် ထင်ရတဲ့ ဆေးပညာ တီထွင်မှု ၁၀ ခု – Gentleman Magazine
သိပ္ပံဝတ္ထုလို့တောင် ထင်ရတဲ့ ဆေးပညာ တီထွင်မှု ၁၀ ခု
Cleveland Clinic ဟာ ဆေးပညာလောကမှာ လက်ရှိ ထိုးဖောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ နည်းပညာသစ် ၁၀ ခုကို ရွေးချယ်တင်ပြထားပါတယ်။ ခုပဲ ကုသခံလို့ ရပြီဖြစ်တဲ့ ဆေးသိပ္ပံပညာသစ် ၁၀ ခုကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
၁. The Bionic Eye
ဒီမျက်လုံးတုဟာ နေကာမျက်မှန်ထဲ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ ကင်မရာတွေက ပို့လွှတ်တဲ့ ပုံတွေကို လူတွေရဲ့ အမြင်အာရုံခံလွှာကို ကြိုးမဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ပို့လွှတ်ပေးတဲ့ နည်းစနစ်ကို သုံးထားပါတယ်။ မျက်လုံး အစစ်လို မပြည့်စုံပေမယ့် မျက်မမြင် တစ်ယောက်ကို လမ်းလျှောက်တာ၊ ခြေအိပ် အရောင် ခွဲတာ လောက်တော့ လုပ်နိုင်စေပါတယ်။ ကာလ ကြာရင် အရည်အသွေး လျော့သွားမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အမြင် အာရုံခံလွှာ ပျက်စီးတဲ့ ရောဂါ ဖြစ်နေတဲ့ လူပေါင်း ၁.၇၅ သန်းကို ကူညီနိုင်မယ် မျှော်လင့်ရပါတယ်။
၂. ကင်ဆာ ဗီဇ စစ်ဆေးခြင်း
ကင်ဆာဆဲလ်တစ်ခုရဲ့ ဗီဇကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ထိုကင်ဆာဟာ ဓာတ်ရောင်ချည် တိုးရဲ့လား၊ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ကုသလို့ အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ် ကုသမှုတွေ မလုပ်ရလို့ အရေးကြီးတဲ့ ထိရောက်မယ့် ကုသမှုဆီ ဒါရိုက် သွားနိုင်ခြင်းနဲ့ အသက် ကယ်နိုင်ပါတယ်။
၃. မူးမိုက်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
ဒီစနစ်မှာ ဦးနှောက်ထဲမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ မူးမော်ခြင်းကို ကြိုတင်အာရုံခံနိုင်မယ့် ဆင်ဆာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ မူးမော်ခြင်း ဖြစ်မှာကို အာရုံခံမိရင် ဦးနှောက်ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို လျှပ်စစ်ဓာတ် လွှတ်ပြီး မူးမော်ခြင်း ရပ်တန့်စေပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ ပထမနှစ်မှာ မူးမော်ခြင်းတွေကို ၄၀ ရာနှုန်း လျော့ကျစေပါတယ်။
၄. အသည်းရောင်ရောဂါ ကုသခြင်း
အရင်ကဆိုရင် အသည်းရောင် အသားဝါ ရောဂါ စီ ကူးစက်နေတဲ့ လူနာတွေရဲ့ ၇၀ ရာနှုန်းကိုပဲ ကုသနိုင်ပါတယ်။ အခု Sofosbuvir ဆိုတဲ့ ဆေးအသစ်ကတော့ ၉၅ ရာနှုန်းကို ကုသနိုင်ပြီး ၁၂ ပါတ်ပဲ ဆေးသောက်စရာ လိုတာပါ။
၅. မေ့ဆေးဆရာဝန်တွေရဲ့ Ipad
မေ့ဆေးဆရာဝန်ဟာ ခွဲစိတ်ကုသရာမှာ အရေးကြီးဆုံးပါ။ မေ့ဆေးဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ သင့်ရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ အသက်ရှုနှုန်း၊ ဦးနှောက် အလုပ်လုပ်ပုံတွေကို စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အပြင် မေ့ဆေးနဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ပမာဏကိုလဲ ချိန်နေရပါတယ်။ အခု အဲဒီစနစ်တွေအတွက် ရေးဆွဲထားတဲ့ Application တစ်ခု ရှိနေပြီး အမှားရှာရ မြန်တဲ့အပြင် ရှည်ကြာတဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေမှာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကနေ တစ်ယောက် လက်လွှဲပေးဖို့လဲ ပို အဆင်ပြေပါတယ်။
၆. မစင် အစားထိုးခြင်း
မစင် အစားထိုးကုသတာဟာ C.difficile ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားကို ကုသရာမှာ အရေးပါပါတယ်။ မစင်ဟာ ကုသပစ္စည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မစင်ထဲမှာ နေထိုင်တဲ့ အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတွေက ကုသပစ္စည်းပါ။ အခုဆို ကနေဒါက လေ့လာသူတွေက မစင်ထဲက ဘက်တီးရီးယားကို ခွဲထုတ်ပြီး သောက်ဆေးအဖြစ် သောက်သုံးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ရှာတွေ့ခဲ့ပါပြီ။
၇. နှလုံးကယ်တင်နိုင်မယ့် ဟော်မုန်း
Serelaxin ဆိုတဲ့ ဆေးဟာ နှလုံးရောဂါ လူနာတွေရဲ့ အသက်ရှင်နှုန်းကို ၃၇ ရာနှုန်း ထပ်တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ကိုယ်ဝန်သည်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ဟော်မုန်းဟာ သွေးကြောတွေကို ကျယ်စေပြီးအောက်ဆီဂျင်ပိုရစေကာ အရောင်ကျနိုင်တဲ့ သတ္တိလဲ ပါပါတယ်။
ဒီစက်ဟာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖြစ်ပြီး သူ့အထဲမှာ ခွဲစိတ်ခံ လူနာတွေရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ အသက်ရှုနှုန်း၊ နဲ့ မေ့ဆေးအသွင်း ပမာဏကို ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ လူနာကို လိုအပ်ရင် နှိုးဖို့ နားကြပ်ကလေးတောင် ပါဝင်ပြီး မေ့ဆေးပမာဏ အနည်းငယ်ကနေ အလည်အလတ် အထိကို သူ့ဘာသာ ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီစက်ကလေးက မေ့ဆေးဆရာဝန် တစ်ယောက်ထဲက လူနာများစွာကို တစ်ချိန်ထဲ ကြည့်ရှုနိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
၉. နှလုံးရောဂါ ရရှိနိုင်မှု အခြေအနေ စစ်တမ်း
ခုခေတ်မှာ နှလုံးရောဂါအတွက် ကိုလက်စထရော လယ်ဗယ်ကို စစ်ကြပါတယ်။ မကြာခင်မှာတော့ အူတွင်း ဗက်တီးရီးယားတွေက ထုတ်တဲ့ TMAO ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်း လယ်ဗယ်ကို စစ်ကြရပါမယ်။ TMAO မြင့်သူတွေဟာ နိမ့်သူတွေထက် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်မှုနှုန်း ၂၅၀ ရာနှုန်း ပိုများပါတယ်။ TMAO ဟာ ဥတွေ၊ အနီရောင်အသားတွေ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
၁၀. တိကျတဲ့ ကင်ဆာ ကုသမှု နည်းလမ်းများ
ကင်ဆာကုရာမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆဲလ်တွေကို မထိစေပဲ ကင်ဆာ အကြိတ်ကိုပဲ ထိအောင် ကုသဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု ကင်ဆာဆဲလ်တွေအကြောင်း ပိုပြီး နားလည်လာတာနဲ့ အမျှ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ကြီးထွားမှုကိုပဲ တိတိကျကျ ထိအောင် ကုသနိုင်တဲ့ ဆေးတွေ ပေါ်လာပါတယ်။
သိပ်ပံဝတ်ထုလို့တောငျ ထငျရတဲ့ ဆေးပညာ တီထှငျမှု ၁၀ ခု
Cleveland Clinic ဟာ ဆေးပညာလောကမှာ လကျရှိ ထိုးဖောကျနပွေီဖွဈတဲ့ နညျးပညာသဈ ၁၀ ခုကို ရှေးခယျြတငျပွထားပါတယျ။ ခုပဲ ကုသခံလို့ ရပွီဖွဈတဲ့ ဆေးသိပ်ပံပညာသဈ ၁၀ ခုကို လလေ့ာကွညျ့ကွရအောငျ။
ဒီမကျြလုံးတုဟာ နကောမကျြမှနျထဲ ထညျ့သှငျးတညျဆောကျထားတဲ့ ကငျမရာတှကေ ပို့လှတျတဲ့ ပုံတှကေို လူတှရေဲ့ အမွငျအာရုံခံလှာကို ကွိုးမဲ့ နညျးလမျးနဲ့ ပို့လှတျပေးတဲ့ နညျးစနဈကို သုံးထားပါတယျ။ မကျြလုံး အစဈလို မပွညျ့စုံပမေယျ့ မကျြမမွငျ တဈယောကျကို လမျးလြှောကျတာ၊ ခွအေိပျ အရောငျ ခှဲတာ လောကျတော့ လုပျနိုငျစပေါတယျ။ ကာလ ကွာရငျ အရညျအသှေး လြော့သှားမှာ ဖွဈပမေယျ့ အမွငျ အာရုံခံလှာ ပကျြစီးတဲ့ ရောဂါ ဖွဈနတေဲ့ လူပေါငျး ၁.၇၅ သနျးကို ကူညီနိုငျမယျ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။
၂. ကငျဆာ ဗီဇ စဈဆေးခွငျး
ကငျဆာဆဲလျတဈခုရဲ့ ဗီဇကို စဈဆေးခွငျးဖွငျ့ ထိုကငျဆာဟာ ဓာတျရောငျခညျြ တိုးရဲ့လား၊ ဘယျလိုပုံစံနဲ့ ကုသလို့ အဆငျပွမေလဲ ဆိုတာကို သိရှိနိုငျပွီ ဖွဈပါတယျ။ စမျးသပျ ကုသမှုတှေ မလုပျရလို့ အရေးကွီးတဲ့ ထိရောကျမယျ့ ကုသမှုဆီ ဒါရိုကျ သှားနိုငျခွငျးနဲ့ အသကျ ကယျနိုငျပါတယျ။
၃. မူးမိုကျခွငျးကို ထိနျးသိမျးခွငျး
ဒီစနဈမှာ ဦးနှောကျထဲမှာ တပျဆငျထားတဲ့ မူးမျောခွငျးကို ကွိုတငျအာရုံခံနိုငျမယျ့ ဆငျဆာတှေ ပါဝငျပါတယျ။ မူးမျောခွငျး ဖွဈမှာကို အာရုံခံမိရငျ ဦးနှောကျရဲ့ လိုအပျတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှကေို လြှပျစဈဓာတျ လှတျပွီး မူးမျောခွငျး ရပျတနျ့စပေါတယျ။ အသုံးပွုတဲ့ ပထမနှဈမှာ မူးမျောခွငျးတှကေို ၄၀ ရာနှုနျး လြော့ကစြပေါတယျ။
၄. အသညျးရောငျရောဂါ ကုသခွငျး
အရငျကဆိုရငျ အသညျးရောငျ အသားဝါ ရောဂါ စီ ကူးစကျနတေဲ့ လူနာတှရေဲ့ ၇၀ ရာနှုနျးကိုပဲ ကုသနိုငျပါတယျ။ အခု Sofosbuvir ဆိုတဲ့ ဆေးအသဈကတော့ ၉၅ ရာနှုနျးကို ကုသနိုငျပွီး ၁၂ ပါတျပဲ ဆေးသောကျစရာ လိုတာပါ။
၅. မဆေ့ေးဆရာဝနျတှရေဲ့ Ipad
မဆေ့ေးဆရာဝနျဟာ ခှဲစိတျကုသရာမှာ အရေးကွီးဆုံးပါ။ မဆေ့ေးဆရာဝနျတဈယောကျဟာ သငျ့ရဲ့ နှလုံးခုနျနှုနျး၊ အသကျရှုနှုနျး၊ ဦးနှောကျ အလုပျလုပျပုံတှကေို စောငျ့ကွညျ့နရေတဲ့အပွငျ မဆေ့ေးနဲ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး ပမာဏကိုလဲ ခြိနျနရေပါတယျ။ အခု အဲဒီစနဈတှအေတှကျ ရေးဆှဲထားတဲ့ Application တဈခု ရှိနပွေီး အမှားရှာရ မွနျတဲ့အပွငျ ရှညျကွာတဲ့ ခှဲစိတျမှုတှမှော ဆရာဝနျတဈယောကျကနေ တဈယောကျ လကျလှဲပေးဖို့လဲ ပို အဆငျပွပေါတယျ။
၆. မစငျ အစားထိုးခွငျး
မစငျ အစားထိုးကုသတာဟာ C.difficile ဆိုတဲ့ ဘကျတီးရီးယားကို ကုသရာမှာ အရေးပါပါတယျ။ မစငျဟာ ကုသပစ်စညျး မဟုတျပါဘူး။ မစငျထဲမှာ နထေိုငျတဲ့ အကြိုးပွု ဘကျတီးရီးယားတှကေ ကုသပစ်စညျးပါ။ အခုဆို ကနဒေါက လလေ့ာသူတှကေ မစငျထဲက ဘကျတီးရီးယားကို ခှဲထုတျပွီး သောကျဆေးအဖွဈ သောကျသုံးနိုငျမယျ့ နညျးလမျး ရှာတှခေဲ့ပါပွီ။
၇. နှလုံးကယျတငျနိုငျမယျ့ ဟျောမုနျး
Serelaxin ဆိုတဲ့ ဆေးဟာ နှလုံးရောဂါ လူနာတှရေဲ့ အသကျရှငျနှုနျးကို ၃၇ ရာနှုနျး ထပျတိုးပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီ ကိုယျဝနျသညျတှမှော တှရေ့တဲ့ ဟျောမုနျးဟာ သှေးကွောတှကေို ကယျြစပွေီးအောကျဆီဂငျြပိုရစကော အရောငျကနြိုငျတဲ့ သတ်တိလဲ ပါပါတယျ။
ဒီစကျဟာ ကှနျပြူတာတဈလုံးဖွဈပွီး သူ့အထဲမှာ ခှဲစိတျခံ လူနာတှရေဲ့ နှလုံးခုနျနှုနျး၊ အသကျရှုနှုနျး၊ နဲ့ မဆေ့ေးအသှငျး ပမာဏကို ထိနျးခြုပျပေးပါတယျ။ လူနာကို လိုအပျရငျ နှိုးဖို့ နားကွပျကလေးတောငျ ပါဝငျပွီး မဆေ့ေးပမာဏ အနညျးငယျကနေ အလညျအလတျ အထိကို သူ့ဘာသာ ပေးပါလိမျ့မယျ။ ဒီစကျကလေးက မဆေ့ေးဆရာဝနျ တဈယောကျထဲက လူနာမြားစှာကို တဈခြိနျထဲ ကွညျ့ရှုနိုငျအောငျ ကူညီပေးပါတယျ။
၉. နှလုံးရောဂါ ရရှိနိုငျမှု အခွအေနေ စဈတမျး
ခုခတျေမှာ နှလုံးရောဂါအတှကျ ကိုလကျစထရော လယျဗယျကို စဈကွပါတယျ။ မကွာခငျမှာတော့ အူတှငျး ဗကျတီးရီးယားတှကေ ထုတျတဲ့ TMAO ဆိုတဲ့ ဟျောမုနျး လယျဗယျကို စဈကွရပါမယျ။ TMAO မွငျ့သူတှဟော နိမျ့သူတှထေကျ နှလုံးရောဂါ ဖွဈနိုငျမှုနှုနျး ၂၅၀ ရာနှုနျး ပိုမြားပါတယျ။ TMAO ဟာ ဥတှေ၊ အနီရောငျအသားတှေ၊ နို့ထှကျပစ်စညျးတှမှော ပါဝငျပါတယျ။
၁၀. တိကတြဲ့ ကငျဆာ ကုသမှု နညျးလမျးမြား
ကငျဆာကုရာမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ ဆဲလျတှကေို မထိစပေဲ ကငျဆာ အကွိတျကိုပဲ ထိအောငျ ကုသဖို့ မလှယျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အခု ကငျဆာဆဲလျတှအေကွောငျး ပိုပွီး နားလညျလာတာနဲ့ အမြှ ကငျဆာဆဲလျတှေ ကွီးထှားမှုကိုပဲ တိတိကကြ ထိအောငျ ကုသနိုငျတဲ့ ဆေးတှေ ပျေါလာပါတယျ။
Previous: ကုမ္ပဏီကို ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလီယံနဲ့ ရောင်းလိုက်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျရတဲ့အခါ..
Next: Porn ဖြတ်ခြင်း